Jennifer Lopez နဲ့ သူမရဲ့ ရညျးစားဟောငျးမြား။ – SoShwe
Home/Entertainment/Jennifer Lopez နဲ့ သူမရဲ့ ရညျးစားဟောငျးမြား။
Jennifer Lopez နဲ့ သူမရဲ့ ရညျးစားဟောငျးမြား။
admin March 10, 2022	Entertainment, LifeStyle Leaveacomment
Jenneifer Lopez အနနေဲ့ လူသိထငျရှား တှဲခုတျခဲ့တဲ့ ရညျးစားဟောငျးတှေ ရှိပမေယျ့လညျး သူမအနနေဲ့ အဆငျပွခြေောမှခေဲ့တယျဆိုတာမရှိခဲ့ပါဘူး။ ရုပျရှငျသရုပျဆောငျမငျးသမီး၊ အဆိုတျော JLO အနနေဲ့ သုံးကွိမျတိုငျတိုငျလကျထပျခဲ့ပွီး ဟောလီးဝုဒျမှာ ထငျပျေါကြျောကွားသူတှနေဲ့လညျး တှဲခုတျခဲ့ပါသေးတယျ။ (Batman မငျးသားကွီး Ben Affleck လညျး အပါအဝငျပေါ့ . . .) အခုဆကျလကျပွီးတော့ JLO ရဲ့ အနုပညာသကျတမျးတဈလြှောကျ သူမနဲ့ လူသိရှငျကွား တှဲခုတျခဲ့တဲ့ သူမရဲ့ ရညျးစားဟောငျးတှကေို ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျနျော . . .
၁။ Ojani Noa
JLO ဟာ ရုပျရှငျထုတျလုပျသူတဈဦးဖွဈတဲ့ Ojani နဲ့ ဖဖေျောဝါရီ ၁၉၉၇ ခုနှဈမှာ လကျထပျခဲ့ပါတယျ။ သို့ပမေယျ့ သူတို့နှဈယောကျရဲ့ Relationship အခွအေနဟော ဖွောငျ့ဖွူးသာယာမှု မရှိခဲ့ပါဘူး။ မင်ျဂလာဆောငျပွီး ၁၁ လအကွာ သွဂုတျလ ၁၉၉၈ ခုနှဈမှာ နှဈဦးသဘောတူ ကှာရှငျးပွတျဆဲခဲ့ ကွပါတယျ။
၂။ Sean “ Diddy ” Combs
JLO ဟာ ၁၉၉၉ ခုနှဈမှာတော့ Hip Hop လောကမှာ နာမညျကြျောကွားခဲ့သူတဈယောကျဖွဈတဲ့ Sean နဲ့ စတငျတှဲခုတျခဲ့ပါတယျ။ ၂ နှဈကွာလောကျ တှဲခုတျပွီး ၂၀၀၁ ခုနှဈအရောကျမှာ လမျးခှဲခဲ့ကွပါတယျ။ ၂၀၀၃ ခုနှဈက The Vibe Magazine ရဲ့ ဖျောပွခကျြအရ Sean ဟာ JLO နဲ့ တှဲနစေဉျအတောအတှငျး ဖောကျပွနျတဲ့ ကိစ်စရပျတှကေို အကွိမျကွိမျအခါခါ ကြူးလှနျခဲ့ဖူးတယျလို့ သိရှိရပါတယျ။
၃။ Cris Judd
၂၀၀၁ ခုနှဈ၊ စကျတငျဘာလမှာတော့ JLO တဈယောကျ သူမရဲ့ သီခငျြးဖွဈတဲ့ “ Love don’t costathing ” ဆိုတဲ့ Music Video ထဲမှ နောကျခံအကသမား Cris Judd နဲ့ တရားဝငျတှဲခဲ့ပါတယျ။ သူတို့စုံတှဲဟာ ဇှနျလ ၂၀၀၂ ခုနှဈမှာ လကျထပျခဲ့ကွပွီး ၂၀၀၃ ခုနှဈမှာတော့ ကှာရှငျးပွတျစဲခဲ့ပါတယျ။ ၂၀၁၄ ခုနှဈ၊ စကျတငျဘာလက Us Weekly Magazine နဲ့ အငျတာဗြူးတဈခုမှာတော့ Cris မှ “ လုံးဝ အဆငျပွခြေောမှခေဲ့ခွငျး မရှိပါဘူး . . .” ဆိုပွီး ထုတျဖျောပွောကွားခဲ့ပါတယျ။ “ တကယျလို့ ခငျဗြားအနနေဲ့ မင်ျဂလာဆောငျထားတဲ့သူတဈယောကျဆိုရငျ ကိစ်စရပျတိုငျးကို အလှယျတကူအလြှော့မပေးသငျ့ပါဘူး . . . ” ဆိုပွီး Cris မှ ဆကျလကျပွောကွားခဲ့ပါတယျ။
၄။ Ben Affleck
Justice League မငျးသားကွီး Ben နဲ့ JLO တို့ဟာ Gigli ရုပျရှငျဇာတျကားကို ရိုကျကူးရငျး မတ်ေတာမြှခဲ့ကွပါတယျ။ သူတို့စုံတှဲကို ပရိသတျတှကေ Bennifer လို့ နာမညျပွောငျပေးထားကွပွီး သူတို့နှဈယောကျဟာ နိုဝငျဘာ ၂၀၀၂ ခုနှဈမှာ စစေ့ပျပှဲ ပွုလုပျခဲ့ကွပါတယျ။ ၂၀၀၄ ခုနှဈ ဇနျနဝါရီလမှာတော့ နှဈယောကျသား လမျးခှဲခဲ့ကွပွီး JLO မှ “ ကြှနျမအနနေဲ့ အလုပျအပျေါမှာပဲ အာရုံစိုကျနခေဲ့ပွီး Ben နဲ့ ကြှနျမနဲ့ ဆကျဆံရေးဟာလညျး ကြှနျမကွောငျ့ပဲ ပကျြစီးခဲ့ရခွငျးဖွဈတယျ . . .” ဆိုပွီး JLO မှ နှဈတှအေတျောကွာပွီးမှ အငျတာဗြူးတဈခုမှာ ထုတျဖျောပွောကွားလာခဲ့ခွငျးဖွဈပါတယျ။
၅။ Marc Anthony
JLO နဲ့ Marc တို့ ၂၀၀၄ ခုနှဈမှာ လကျထပျခဲ့ကွပွီး ၂၀၀၈ ခုနှဈမှာတော့ Max နဲ့ Emme ဆိုတဲ့ အမွှာနှဈယောကျကို မှေးဖှားခဲ့ပါတယျ။ သို့ပမေယျ့လညျး ၇ နှဈအကွာ ပေါငျးဖကျပွီးနောကျမှာ နှဈဦးသဘောတူ ကှာရှငျးပွတျစဲခဲ့ကွပါတယျ။ “ ကြှနျမရဲ့ Relationship တဈခု အဆုံးသတျသှားတဲ့အခြိနျမှာ ကြှနျမအနနေဲ့ ခှငျ့လှတျပေးဖို့ဆိုတဲ့အကွောငျးရငျးကို ရှာဖှလေို့မရနိုငျခဲ့ပါဘူး။ ဒါပမေယျ့ Marc ကတော့ ကြှနျမကလေးတှရေဲ့ အဖဆေိုတော့ ကြှနျမဖကျကနေ အကောငျးဆုံးဖွဈအောငျ ကွိုးစားသှားမှာပါ . . .” ဆိုပွီး ဧပွီလ ၂၀၁၆ ခုနှဈတုနျးက အငျတာဗြူးတဈခုမှာ ပွောကွားခဲ့ပါတယျ။
၆။ Beau “ Casper ” Smart
Anthony နဲ့ လမျးခှဲပွီး ၄လ အကွာမှာတော့ JLO တဈယောကျ နောကျခံအကသမားဖွဈတဲ့ Casper နဲ့ တှဲခဲ့ပါတယျ။ နောကျပိုငျးမှာတော့ JLO က Casper အား Las Vegas မှာရှိတဲ့ All I have residency အပနျးဖွခေနျးမရဲ့ Creative Director အဖွဈ ခနျ့ထားခဲ့ပါတယျ။ နောကျပိုငျး ရရှိခဲ့တဲ့ သတငျးတဈခြို့အရ Casper ဟာ လိငျပွောငျးထားတဲ့ မျောဒယျတဈဦးနဲ့ ဓာတျပုံတှေ ဖလှယျခွငျး၊ Message တှနေဲ့ အဆကျအသှယျတှပွေုလုပျနတေယျဆိုပွီး သိရှိရပါတယျ။ ဒီလိုနဲ့ သူတို့နှဈယောကျဟာ ပွတျသှားလိုကျ၊ ပွနျတှဲလိုကျနဲ့ နောကျဆုံး ၂၀၁၆ ခုနှဈမှာတော့ တရားဝငျ ပွတျစဲခဲ့ကွပါတယျ။
The God’s Plan အဆိုတျော Drake ဟာ ၂၀၁၆ ခုနှဈ ဒီဇငျဘာမှာ JLO ရဲ့ ဖြျောဖွတေငျဆကျပှဲကို တကျရောကျလာခဲ့ပါတယျ။ ထိုအခြိနျမှစ၍ သူတို့နှဈဦး အဆကျအသှယျတှေ ပွုလုပျလာကွပွီိး ၂၀၁၇ ခုနှဈ ဇနျနဝါရီလမှာတော့ မင်ျဂလာဆောငျဖို့အတှကျ စီစဉျခဲ့ကွပါတယျ။ သို့ပမေယျ့လညျး အကွောငျးအမြိုးမြိုးကွောငျ့ ဖဖေျောဝါရီလထဲမှာပဲ လမျးခှဲခဲ့ကွပါတယျ။
၈။ Alex Rodriguez
၂၀၁၇ ခုနှဈမှာတော့ JLO တဈယောကျ အမရေိကနျ ဘစျေ့ဘောကစားသမားဟောငျးတဈယောကျဖွဈတဲ့ Alex နဲ့ တှဲခုတျခဲ့ပွီး ၂၀၂၁ ခုနှဈ ဧပွီလမှာ နှဈဦးသဘောတူ လမျးခှဲခဲ့ကွပါတယျ။
Jennifer Lopez နဲ့ သူမရဲ့ ရည်းစားဟောင်းများ။
Jenneifer Lopez အနေနဲ့ လူသိထင်ရှား တွဲခုတ်ခဲ့တဲ့ ရည်းစားဟောင်းတွေ ရှိပေမယ့်လည်း သူမအနေနဲ့ အဆင်ပြေချောမွေ့ခဲ့တယ်ဆိုတာမရှိခဲ့ပါဘူး။ ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်မင်းသမီး၊ အဆိုတော် JLO အနေနဲ့ သုံးကြိမ်တိုင်တိုင်လက်ထပ်ခဲ့ပြီး ဟောလီးဝုဒ်မှာ ထင်ပေါ်ကျော်ကြားသူတွေနဲ့လည်း တွဲခုတ်ခဲ့ပါသေးတယ်။ (Batman မင်းသားကြီး Ben Affleck လည်း အပါအဝင်ပေါ့ . . .) အခုဆက်လက်ပြီးတော့ JLO ရဲ့ အနုပညာသက်တမ်းတစ်လျှောက် သူမနဲ့ လူသိရှင်ကြား တွဲခုတ်ခဲ့တဲ့ သူမရဲ့ ရည်းစားဟောင်းတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော် . . .
JLO ဟာ ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်သူတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Ojani နဲ့ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၉၉၇ ခုနှစ်မှာ လက်ထပ်ခဲ့ပါတယ်။ သို့ပေမယ့် သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ Relationship အခြေအနေဟာ ဖြောင့်ဖြူးသာယာမှု မရှိခဲ့ပါဘူး။ မင်္ဂလာဆောင်ပြီး ၁၁ လအကြာ သြဂုတ်လ ၁၉၉၈ ခုနှစ်မှာ နှစ်ဦးသဘောတူ ကွာရှင်းပြတ်ဆဲခဲ့ ကြပါတယ်။
JLO ဟာ ၁၉၉၉ ခုနှစ်မှာတော့ Hip Hop လောကမှာ နာမည်ကျော်ကြားခဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Sean နဲ့ စတင်တွဲခုတ်ခဲ့ပါတယ်။ ၂ နှစ်ကြာလောက် တွဲခုတ်ပြီး ၂၀၀၁ ခုနှစ်အရောက်မှာ လမ်းခွဲခဲ့ကြပါတယ်။ ၂၀၀၃ ခုနှစ်က The Vibe Magazine ရဲ့ ဖော်ပြချက်အရ Sean ဟာ JLO နဲ့ တွဲနေစဉ်အတောအတွင်း ဖောက်ပြန်တဲ့ ကိစ္စရပ်တွေကို အကြိမ်ကြိမ်အခါခါ ကျူးလွန်ခဲ့ဖူးတယ်လို့ သိရှိရပါတယ်။
၂၀၀၁ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလမှာတော့ JLO တစ်ယောက် သူမရဲ့ သီချင်းဖြစ်တဲ့ “ Love don’t costathing ” ဆိုတဲ့ Music Video ထဲမှ နောက်ခံအကသမား Cris Judd နဲ့ တရားဝင်တွဲခဲ့ပါတယ်။ သူတို့စုံတွဲဟာ ဇွန်လ ၂၀၀၂ ခုနှစ်မှာ လက်ထပ်ခဲ့ကြပြီး ၂၀၀၃ ခုနှစ်မှာတော့ ကွာရှင်းပြတ်စဲခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလက Us Weekly Magazine နဲ့ အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာတော့ Cris မှ “ လုံးဝ အဆင်ပြေချောမွေ့ခဲ့ခြင်း မရှိပါဘူး . . .” ဆိုပြီး ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ “ တကယ်လို့ ခင်ဗျားအနေနဲ့ မင်္ဂလာဆောင်ထားတဲ့သူတစ်ယောက်ဆိုရင် ကိစ္စရပ်တိုင်းကို အလွယ်တကူအလျှော့မပေးသင့်ပါဘူး . . . ” ဆိုပြီး Cris မှ ဆက်လက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
Justice League မင်းသားကြီး Ben နဲ့ JLO တို့ဟာ Gigli ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကို ရိုက်ကူးရင်း မေတ္တာမျှခဲ့ကြပါတယ်။ သူတို့စုံတွဲကို ပရိသတ်တွေက Bennifer လို့ နာမည်ပြောင်ပေးထားကြပြီး သူတို့နှစ်ယောက်ဟာ နိုဝင်ဘာ ၂၀၀၂ ခုနှစ်မှာ စေ့စပ်ပွဲ ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ ၂၀၀၄ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလမှာတော့ နှစ်ယောက်သား လမ်းခွဲခဲ့ကြပြီး JLO မှ “ ကျွန်မအနေနဲ့ အလုပ်အပေါ်မှာပဲ အာရုံစိုက်နေခဲ့ပြီး Ben နဲ့ ကျွန်မနဲ့ ဆက်ဆံရေးဟာလည်း ကျွန်မကြောင့်ပဲ ပျက်စီးခဲ့ရခြင်းဖြစ်တယ် . . .” ဆိုပြီး JLO မှ နှစ်တွေအတော်ကြာပြီးမှ အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာ ထုတ်ဖော်ပြောကြားလာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
JLO နဲ့ Marc တို့ ၂၀၀၄ ခုနှစ်မှာ လက်ထပ်ခဲ့ကြပြီး ၂၀၀၈ ခုနှစ်မှာတော့ Max နဲ့ Emme ဆိုတဲ့ အမြွှာနှစ်ယောက်ကို မွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။ သို့ပေမယ့်လည်း ၇ နှစ်အကြာ ပေါင်းဖက်ပြီးနောက်မှာ နှစ်ဦးသဘောတူ ကွာရှင်းပြတ်စဲခဲ့ကြပါတယ်။ “ ကျွန်မရဲ့ Relationship တစ်ခု အဆုံးသတ်သွားတဲ့အချိန်မှာ ကျွန်မအနေနဲ့ ခွင့်လွှတ်ပေးဖို့ဆိုတဲ့အကြောင်းရင်းကို ရှာဖွေလို့မရနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် Marc ကတော့ ကျွန်မကလေးတွေရဲ့ အဖေဆိုတော့ ကျွန်မဖက်ကနေ အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ကြိုးစားသွားမှာပါ . . .” ဆိုပြီး ဧပြီလ ၂၀၁၆ ခုနှစ်တုန်းက အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
Anthony နဲ့ လမ်းခွဲပြီး ၄လ အကြာမှာတော့ JLO တစ်ယောက် နောက်ခံအကသမားဖြစ်တဲ့ Casper နဲ့ တွဲခဲ့ပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာတော့ JLO က Casper အား Las Vegas မှာရှိတဲ့ All I have residency အပန်းဖြေခန်းမရဲ့ Creative Director အဖြစ် ခန့်ထားခဲ့ပါတယ်။ နောက်ပိုင်း ရရှိခဲ့တဲ့ သတင်းတစ်ချို့အရ Casper ဟာ လိင်ပြောင်းထားတဲ့ မော်ဒယ်တစ်ဦးနဲ့ ဓာတ်ပုံတွေ ဖလှယ်ခြင်း၊ Message တွေနဲ့ အဆက်အသွယ်တွေပြုလုပ်နေတယ်ဆိုပြီး သိရှိရပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ သူတို့နှစ်ယောက်ဟာ ပြတ်သွားလိုက်၊ ပြန်တွဲလိုက်နဲ့ နောက်ဆုံး ၂၀၁၆ ခုနှစ်မှာတော့ တရားဝင် ပြတ်စဲခဲ့ကြပါတယ်။
The God’s Plan အဆိုတော် Drake ဟာ ၂၀၁၆ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာမှာ JLO ရဲ့ ဖျော်ဖြေတင်ဆက်ပွဲကို တက်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ ထိုအချိန်မှစ၍ သူတို့နှစ်ဦး အဆက်အသွယ်တွေ ပြုလုပ်လာကြပြီိး ၂၀၁၇ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလမှာတော့ မင်္ဂလာဆောင်ဖို့အတွက် စီစဉ်ခဲ့ကြပါတယ်။ သို့ပေမယ့်လည်း အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ဖေဖော်ဝါရီလထဲမှာပဲ လမ်းခွဲခဲ့ကြပါတယ်။
၂၀၁၇ ခုနှစ်မှာတော့ JLO တစ်ယောက် အမေရိကန် ဘေ့စ်ဘောကစားသမားဟောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Alex နဲ့ တွဲခုတ်ခဲ့ပြီး ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဧပြီလမှာ နှစ်ဦးသဘောတူ လမ်းခွဲခဲ့ကြပါတယ်။
Previous အိမျထောငျဖကျတှရေဲ့ ခဈြသံယောဇဉျကို မခိုငျမွဲစတေဲ့ အကွောငျးအရငျးမြား။
Next စုံတှဲတှတေိုငျး ကွုံတှတေ့တျတဲ့ ပွဿနာအသေးအဖှဲလေးမြား။